Sina EAS SYSTEM AM System Acrylic avo lenta mora 58KHz Fivarotana fitafiana Security Gate-PG300 mpanamboatra sy mpamatsy | Etagtron
Fivarotana fitafiana fanairana EAS System
•Ny fototra fiarovana-akrilika sy vy dia mahatonga ny antennas ho mahatohitra indrindra, manome "fahatsapana tsy hita maso", endrika kanto sy avo lenta amin'ny fivarotana anatiny na maoderina.
•Safidy fanairana lavitra mampitandrina ny mpiasa amin'ny hetsika fanairana na aiza na aiza fivarotana
•Seranan-tserasera fifandraisana serivisy mamela ny fanaraha-maso rindrambaiko rafitra feno amin'ny antena rehetra
•Ny mpandrindra tsirairay dia afaka mampifandray hatramin'ny antennas 4.
Fampahalalana lehibe momba ny sensor fiarovana ny fivarotana akanjo:
1.Manohana ny akora Mitsubishi, afaka mitazona ny loko tsy misy loko, tsy misy fihoarana farafaharatsiny
2. 10 taona amin'ny tontolo anaty.
3. Ny takelaka fototra dia vita amin'ny alimina alimina avo lenta miaraka amin'ny oksidasian'ny tany, matanjaka sy tsara tarehy.
4. Ny fonony dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 304, fa tsy vy 204 tsy mora harafesina.
♦Mandrakotra 2.0m miaraka amin'ny marika DR avy amin'ny antennas roa. Ny mpanara-maso iray dia afaka mitondra hatramin'ny 4 antennas. Ny elanelam-pikarohana malalaka indrindra amin'ny maody Quad (miaraka amin'ny antennas 4) dia mety mihoatra ny 8M misy marika DR.
♦Izy io dia manatsara ny rafitra fanoherana ny fidirana an-tsehatra, ary ny antena dia azo volavolaina malalaka. Ny singa iray, singa roa, na mihoatra dia azo ampiasaina ao amin'ny magazay, ary mitombo ny halaviran'ny detection rehefa mitombo ny isan'ny mampiasa.
Teo aloha: Akanjo mora vidy EAS amina fanodikodinam-bola an-tserasera nomerika AM marika marika malefaka
Manaraka: Fivarotana fivarotana EAS 58khz AM fivarotana fitafiana fanairana fanoherana ny halatra Aystem Gate-PT309